Manao fanelanelanana ho an’ny olony Andriamanitra
"Samia mihaino hianareo, ry firenena rehetra; atongilano ny sofinareo, ry tany sy izay zavatra rehetra eo aminy; ary aoka Jehovah Tompo no ho vavolombelona hanameloka anareo, dia Jehôvah avy ao amin'ny tempoliny masina. Fa, indro, Jehôvah mivoaka avy ao amin'ny fitoerany ary midina ka mandia ny havoana amin'ny tany." - Mika 1:2,3.
Eo amin'ny zava-tsarotra no tena isehoan'ny toetra amam-panahy. (...) Eo amin'ny fiafaran'ny fitsarana ny olombelona no hisy ilay fisedrana lehibe farany, amin'izay dia ho diso aoriana loatra ny hikarakarana izay ilain'ny fanahy.- HF, t. 361.
Manana firaketana momba ny firenen-drehetra Andriamanitra. Nanangona fahatezerana ho amin'ny andron'ny fahatezerana lehibe ny ratsy fanahy teo amin'ny tantaran'ny tany; ary rehefa ho avy ny fotoana hihoaran'ny faharatsiana ny fetran'ny famindrampon'Andriamanitra dia ho ritra ny fahari-pony. Rehefa tonga eo amin'ny fara tampon'ny fandikan-dalàna ireo tarehimarika voatahiry ao amin'ny boky firaketan'ny lanitra, dia ho avy ny fahatezerana tsy miharoharo famindrampo. Ho hita miharihary amin'izay fotoana izay fa zava-mahatahotra ny fanaovana tsinontsinona ny fahari-pon'Andriamanitra.
Ho avy ny fotoan-tsarotra rehefa hikambana ny firenen-drehetra ka hanafoana ny lalàn'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana, hohetsehin'ny hafanam-po hiasa ho an'Andriamanitra ny olona maro noho ny fahabetsahan'ny tsy fahamarinana.
Tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra no hanakana ny avonavon'i Satana izay mikambana amin'ireo ratsy fanahy. Rehefa tonga ny fotoana hisian'ny loza lehibe indrindra mananontanona ny fiangonana, dia hisy vavaka mafana hisandratra ho an'ireo sisa mahatoky. Handre azy Andriamanitra ka hamaly azy rehefa mitehika amin'ny lanitra ny helok'ireo mpandika lalàna. "Tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman'alina" izy? - TFC, b. 5, t. 524.
Ny fanoloana ny tena izy amin'ny sandoka no fizarana farany amin'ity tantara ity. Rehefa manerana izao tontolo izao io fanoloana ny marina amin'ny diso io dia hiseho Andriamanitra. Rehefa asandratra ho ambonin'ny lalàn'Andriamanitra ny lalàn'olombelona, rehefa mitady hanery ny olona hitandrina ny andro voalohany amin'ny herinandro ireo fahefana eto an-tany, dia fantaro fa tonga ny fotoana izay hiasan'Andriamanitra. Hitsangana lzy ao amin'ny fiandrianany ka hanozongozona ny tany. Hivoaka avy amin'ny fitoerany Izy hamaly ny mponina amin'ny tany noho ny helony; ary ny tany hampiseho ny rà izay nofohiny ka tsy hanafina intsony izay novonoina teo aminy.-RH, 23 Aprily 1901.